Iyo nyowani Caliber ebook muoni. Ichi ndicho chiitiko changu | Linux Vakapindwa muropa
Iyi ndiyo nyowani yeCaliber ebook muoni.
Iyo nyowani Caliber ebook muoni iri zvakasiyana zvachose nepamusoro. Zvakawanda zvekuti kunyangwe Pablinux atove akataura nezvehunhu hwayo Pamwe pamwe neakasara eCaliber 4, ndinofunga zvine chikonzero chekutsaurira chinyorwa chinochitaura nezvangu zvakaitika.
Nezvikonzero zviri pamutemo ini ndinojekesa kuti ese screenshots anoenderana nebhuku Dracula naBram Stoker vane kodzero dziri munzvimbo yeruzhinji. Iyi ndiyo Epub vhezheni yeiyo Gutemberg chirongwa.
Isu tatoziva kuti vashandisi veLinux (nevashandisi veWindows) vanowana sei pavanoshandura chimiro. Hapana mumwe wedu akafanana nevashandisi veMac avo, vakatarisana neshanduko, vanobuda mukufora kunorumbidza Mutsvene Steve Jobs.
1 Mashoko mashoma nezveCaliber
2 Iyo nyowani ebook muoni. Idzi ndidzo shanduko
2.1 Izvo zvido
2.1.2 Peji mamiriro
2.1.4 Musoro uye tsoka
2.1.5 Yeketani mapfupi
3 Mhedziso yangu
Mashoko mashoma nezveCaliber
Mumwe mushandisi mutsva anogara achiwedzerwa, uye zvingangoita kuti havazive chii chii chinonzi caliber. Icho chiri pamusoro TOOL (capitalisation ine chinangwa) yebasa nema ebook.
Mureza wayo ndewe maneja wekuunganidza mabhuku iyo inokutendera iwe kupinza uye kutumira kunze uye uye kubva kwakasiyana michina. Iwe unogona zvakare kutora mabhuku maererano nenzira dzakasiyana uye unoshandura pakati pemafomati akasiyana.
Sezvo ini ndiri munhu anoremekedza mutemo uye asingambotyora zvirevo nemamiriro ekupedzisira ekushandisa rezenisi, ini handife ndakakuudza kuti kuburikidza neyechitatu-bato plugin inonzi DeDRM kubviswa, dziviriro iyo huru e-bhuku kutengesa zvitoro zvakaiswa munzvimbo zvinogona kubviswa.
Zvimwe zvishandiso zveCaliber ndizvo muparidzi webhuku (unofanirwa kunyora kodhi, haina kutaridzika saSigil) un ve-bhuku isor yemafomati akakurumbira uye yakatarwa ye fomati inoshandiswa nemuverengi weSony.
Iyo nyowani ebook muoni. Idzi ndidzo shanduko
Dai iwe uine vhezheni yechinyakare ye ebook muverengi nemaresitoreti ako aunoda kuverenga, uye iwe wanga uri pakati pebhuku rinonakidza, uchafanirwa kuzviita futi futi. Izvo hazvichengetedze kumisikidzwa kana chinzvimbo cheshanduro 3.
Shanduro dzakapfuura dzaive neanodzora padivi. Zvino, iwe unofanirwa kutakura bhuku remberi pinda panogadziridzwa pani nekiyi bhatani kana Esc kiyi.
Kutakura bhuku kunogona kuitwa kubva pane yekushandisa menyu kana kutenderera pamusoro pebook uye kusarudza muverengi nekiyi bhatani.
Sarudzo dzakasiyana dzekumisikidza dzave kumiririrwa se akateedzana emabhuroko. Zvinonzwa sekuti vashanduri vari kutsvaga kuti vaunze zvirinyore kune vanobata mahara screen.
Iyi ndiyo yeCaliber ebook muoni wekutsvaga uye ekugadzirisa maturusi epaneru.
Mune mapaneru enzvimbo tinogona kumisikidza inotevera sarudzo:
Pano isu tinowana sarudzo yatove kuzivikanwa mune mamwe ebook kuverenga software senge Windows vhezheni yeMhando. Tinogona kusarudza ku imwe yeaya mana marangi marongero:
Muchena mutsvuku nemavara matema.
Nhema nhema ine mavara machena.
Chiedza sepia kumashure ine mavara matema
Rima sepia kumashure nechena tsamba.
Kana iwe usina kugutsikana nechero ipi yemubatanidzwa, unogona kugara uchiita gadzira iyo yaunonyanya kufarira.
Pano mitsara yezvinyorwa yakasimbiswa, mangani mapeji acharatidzwa uye kuti ndima yacho ichaitwa sei kubva pane rimwe peji kuenda pane rinotevera.
Mukufunga kwangu, sarudzo yekusarudzika (rega chirongwa chiverengere huwandu hwemapeji kuti aratidze zvinoenderana nehukuru hwechidzitiro) haishande zvachose. Nerimwe bhuku randakaedza, ndakaratidzwa makoramu mashanu ane peji rimwe chete.
Iyo inozadzisa basa rakafanana chaizvo nechikamu chemavara, kunze kwekuti panzvimbo pekubaya pamara, tinozviita nekunyora kodhi CSS. Isu tinogona zvakare kusarudza kuisa mufananidzo sepashure.
Zvinonakidza kwazvo kuti ivo vanosanganisira chinongedzo uko kwakasanganiswa kwakasiyana kodhi kodhi.
Musoro uye tsoka
Muchikamu chino tinogona sarudza kuti ndeapi ruzivo acharatidzwa kumusoro kana pasi peji. Izvi zvinogona kuva:
Ruzivo nezve iro bhuku, chikamu kana chitsauko.
Ruzivo pane inofungidzirwa nguva yekupedzisa chitsauko kana bhuku.
Ruzivo nezve izvo zvatoverengerwa.
Pano tinogona kuona akasiyana makiyi musanganiswa izvo zvinotibvumidza isu kuwana nyore mabasa akasiyana.
Ichi chikamu hachidi imwe tsananguro. Asi isu tinogona kuishandisa kuzvibvunza isu kuti nei sarudzo yekuchinja saizi yefonti iri sarudzo yakasarudzika uye kunze kwekumisikidza tebhu.
Muchikamu chino chekupedzisira chegadziriro yatinogona gonesa kana kudzima chero eanotevera sarudzo:
Rangarira yekupedzisira hwindo saizi uye chinzvimbo
Rangarira peji razvino kana uchibuda
Chengeta kopi yezvidimbu uye mabhukumaki mufaira rebhuku, kuti ugovere
Viga mbeva mbeva mubhuku rebhuku
Iwe unoona pawakapfeka shangu mbiri kwemakore uye kamwe kamwe iwe unofanirwa kujaira kune rimwe jira? Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri nebookbook.
Kune zvinhu izvo ivo havana kunyanyisa kujekaSemuenzaniso, iwe unofanirwa kuvhara hwindo rekumisikidza tebhu rauri kushanda naro kuti shanduko dzichengetedzwe.
Kushandura iyo interface muSpanish haina kukwana zvakakwana uye zvakare kune zvinhu zviviri zvandatotaura kare:
Kuenda kune chimwe chikamu chakasiyana kutsanangura saizi yefonti.
Kuti iko kusarudzika kusarudzika kwenhamba yemapeji anofanirwa kuratidzwa haisi nguva dzose yakakwana kuti uverenge wakasununguka.
Kukunda izvi, zvakadaro, muverengi anoshanda zvinonzwisisika achibvumira kuverenga kwakasununguka. Paunofunga nezvazvo, kugona kuwana maturusi usina kusiya iyo yakazara skrini kunonyanya kugadzikana pane kubuda kuti uchimanikidze imwe yemifananidzo padivi sezvazvakaitika mushanduro yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo nyowani Caliber ebook muoni. Ichi ndicho chiitiko changu
Sewe mushandisi weLinux, kunaka kwekuvandudza kujaira.
Semushandisi weMac (Mac Pro 2008), ndinodemba kuti iko kunyorera hakugone kuvandudzwa kune avo vashandisi iyo Apple yasarudza kusavapa mvumo yekuvandudza OS, zvimwe.
Tichaenderera mberi neshanduro 3.
Ini ndichangobva kurodha pasi yazvino gadziriso yecaliber 4.6 uye muoni webhuku haashande, pandinoisa bhuku, hwindo rinovhura umo rinoti: kurodha bhuku mirira… .. asi harirayiri uye rinoramba risina chinhu. nzira yekuzvigadzirisa? Ndatenda.
Ini handizive kuti ndeipi sisitimu inoshanda kana kuti ndeipi bhuku fomati yatiri kutaura nezvayo. Edza kudzima maCaliber ekugadzirisa mafaira. Kana iwe uri paLinux iri mukati me .config folda. Iwe unofanirwa kumisikidza kugona kuona yakavanzwa mafaera kuti uiwane
Marcelo rodriguez akadaro
1. Kufamba nekiyi museve kunondisiya ndiri pakati pemutsara, izvo zvisina kuitika mushanduro yapfuura.
2. Pandinoshandura gwaro rangu kuita Shoko, rinoshandura mavara. Semuenzaniso, yaive nemavara machena pabhuruu kumashure. Mune iyi vhezheni itsva ndinoishandura kuita nhema.
Ivo havana kukwanisa kugadzirisa izvi, kana ndodzokera sei kune yambodarika vhezheni.
3. Kunyanya, mabhatani kuruboshwe airatidzika kunge akasununguka, kunyanya zoom, nekuti izvozvi ndinofanirwa kuenda kuwindo idzva nechinangwa ichi.
Pindura Marcelo Rodriguez